YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, August 28
ဒီလှိုင်း (D.WAVE)ဂျာနယ်ရုံးရှေ့တွင် ရပ်ထားသောကားပေါ်တွင် ဗုံးနှင့်တူသောအရာတွေ့ရှိ
သြဂုတ်လ ၂၈ရက်နေ့ နံနက် ၇း၀၀နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ်ရှီ ဒီလှိုင်း (D.WAVE)ဂျာနယ်ရုံးရှေ့တွင် ရပ်ထားသောကားပေါ်တွင် ဗုံးနှင့်တူသောအရာတွေ့ရှိသောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာကို အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာမှ GE တပ်ကို ခေါ်ယူ၍ ရှင်းလင်းပေးခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။ —
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/28/20120အကြံပြုခြင်း
Written by မောင်အောင်ခိုင်
RSO (Rohingya Solidarity Organisation)၏ ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်သည့် ယခုအခါ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၌ ခိုလှုံနေထိုင်သူ'မူဟာမက်(ဒ်)ယူနု(စ်)(Muhammad Yunus)'ကား
နိုင်ငံတကာငလိမ်ကြီးအဖြစ် သမုတ်ရမည့်သူဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းအား
ထိုသို့သမုတ်ရခြင်းမှာ မလိုမုန်းတီး၍မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတကာ
အသိုင်းအ၀ိုင်းကြားတွင် သမိုင်းလိမ်ဖန်တီးကာ ၀ါဒဖြန့်သည့် ယုတ်မာသော
၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ၊ ဒါကာမြို့ထုတ်
The Guardian ဂျာနယ်တွင် Arakan: A Depressing Scene ခေါင်းစဉ်ဖြင့်
သူရေးသားထားသော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို Cover Story အဖြစ် ဖော်ပြထားသည်ကို
ဖတ်ရှုခဲ့ရပါသည်။ ဆောင်းပါးတစ်ခုလုံးကား မိုးလုံးပြည့်မုသားများနှင့်
ပြည့်လွှမ်းနေပါသည်။ ၄င်းဆောင်းပါးမှ စာသားအချို့မှာ Arakan – an
independent Muslim kingdom of Southeast Asia till 1784 A.D.
ဟူ၍လည်းကောင်း၊ The total population of Arakan is over four million.
The Rohingya Muslims constitute nearly 70% of the total population.
ဟူ၍လည်းကောင်း၊ Muslim rule in Arakan began before 1430 A.D. which
continued upto 1780 A.D., when alien Burman king, Bodaw Phaya invaded
and captured Arakan from the hands of Muslims.
ဟူ၍လည်းကောင်း၊ Since then Muslims have been made
target of genocide and extermination by racist and apartheid Burman
invaders. ဟူ၍လည်းကောင်း ဖြစ်ပါသည်။
သူ ဤဆောင်းပါးအား ရေးသားသောကာလမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘင်္ဂလီလူမျိုးများ
မိမိတို့ဘိုးဘွားများ၏ ဇာတိတိုင်းပြည်ဖြစ်သည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံသို့
ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာတက်ကာ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ-မြန်မာ
နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် တင်းမာနေချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ အခြေအနေရှုပ်ထွေးမှုကို
အခွင့်ကောင်းယူကာ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာမှ
သူတို့ဘင်္ဂလီလူမျိုးများအပေါ် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများရှိခဲ့ပါက သူ့အနေဖြင့်
အဖြစ်မှန်ကို ရေးသားတင်ပြကာ စာနာမှုရရှိအောင် ကြိုးပမ်းနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် ဘာမှပြောစရာမရှိပါ။ သို့သော် အကြံပက်စက်လှစွာဖြင့်
ရခိုင်ပြည်ကို သူတို့၏ ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်တိုင်းပြည်အဖြစ်
ရခိုင်ပြည်တွင် နေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ကြသည့် အစွန်းရောက်ဘင်္ဂလီ
ပညာတတ်အချို့ကား ရခိုင်ပြည်နှင့် ရခိုင်လူမျိုးများအပေါ်
ကျေးဇူးသစ္စာမဲ့လှစွာဖြင့် နိုင်ငံတကာမီဒီယာများကို အသုံးချ၍လည်းကောင်း၊
မူဟာမက်(ဒ်)ယူနု(စ်)ကဲ့သို့ပင် လိမ်လည်လုပ်ကြံ ၀ါဒဖြန့်နေကြသည်မှာ
ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအတွက် န၀တ-နအဖ
စစ်အုပ်စုအား ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက စုပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နေကြစဉ်တွင်
ဘုံတိုက်ပွဲကိုလျစ်လျှူရှုကာ " ပွဲလန့်တုန်းဖျာခင်း
"လုပ်ခဲ့ကြသူများမှာလည်း ယင်းအစွန်းရောက် ဘင်္ဂလီပညာတတ်များပင်ဖြစ်ကြပါသည်။
သူတို့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ "ရိုဟင်ဂျာ" အမည်ခံသူတို့လူမျိုးအား
ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောမြို့နယ်မှ ဘင်္ဂလီများကား ရခိုင်ပြည်ထဲတွင်
နေထိုင်ခဲ့ကြစဉ်က သူတို့ ကိုယ်သူတို့ "အာရာဘင်္ဂလီ(တို့ဘင်္ဂလီ)"ဟု
ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ၄င်းတို့ ဤသို့သုံးနှုန်း ပြောဆိုကြသည်ကို
ဒေသခံရခိုင်လူမျိုးများ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ကြားခဲ့ကြရပါသည်။
ထူးခြားလှသည်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံမှ ရဖျူဂျီစခန်းများသို့
"အာရာရိုဟင်ဂျာ(တို့ရိုဟင်ဂျာ)"များ ဖြစ်သွားကြပါသည်။ သို့သော်
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘင်္ဂလီမူဆလင်အများစုမှာမူ ယခုထိ မိမိတို့ကိုယ်
ကိုမိမိတို့ " အာရာဘင်္ဂလီ "ဟုသာ ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုနေကြတုန်းဖြစ်ပါသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံရှိ ထင်ရှားသောစာနယ်ဇင်းများတွင် နာမည်ရှိသော
"ဂျာနယ်လစ်များ"ပင် ရှေးခေတ် ရခိုင်ပြည်ကို
မူဆလင်တိုင်းပြည်ဟုလည်းကောင်း၊ ၁၇၈၄ ခုနှစ်ထိ ရခိုင်ပြည်ကို
မူဆလင်ဘုရင်များ အုပ်စိုးခဲ့ကြသည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ မူဆလင်များသည်
အေဒီ(၇)ရာစုကပင် ရခိုင်ပြည်တွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊
တချို့ဆှိုလျှင် ရခိုင်လူမျိုးများပင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများထက် နောက်ကျမှ
ရခိုင်ပြည်သို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟူ၍လည်းကောင်း " ရိုဟင်ဂျာ
"အမည်ခံသူများ၏ ၀ါဒဖြန့်ချက်အတိုင်း တသဝေမတိမ်း ရေးသားကြသည်ကို
ဒေါက်တာအေးကျော်၊ ဒေါက်တာအေးချမ်းကဲ့သို့ သမိုင်းပညာရှင်များက
ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ အရှက်မဲ့သူများ၏ သမိုင်းလိမ်ဝါဒဖြန့်မှုများအပေါ်
ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ထောက်ပြရှင်းလင်းခဲ့ကြရာ ၄င်းပုဂ္ဂိုလ်များအား
အမျိုးမျိုးကင်ပွန်းတပ်ကာ ပုတ်ခတ်စော်ကားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်မှာ
ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂလီများကား ပြည်တွင်းတွင်နေထိုင်သူဖြစ်စေ၊
ပြည်ပတွင်ရောက်ရှိနေသူဖြစ်စေ၊ လက်နက်ကိုင်သူဖြစ်စေ၊ လက်နက်မကိုင်သူဖြစ်စေ
သူတို့ကို " ရိုဟင်ဂျာ "အမည်ဖြင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ်
အသိအမှတ်ပြုရေးအတွက် နည်းမျိုးစုံကိုသုံးကာ ၀ါဒဖြန့်နေကြသည်မှာ
မကြားချင်၊ မမြင်ချင်အဆုံးပင်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိကိုယ်ကိုဟုတ်လှပြီဟု
သွေးနထင်ရောက်နေကြသည့် ပါးရည်နပ်ရည်မရှိသော မီဒီယာသမားတစ်ချို့နှင့်
အမှန်တရားကို ဆန်းစစ်ရှာဖွေမှု အားနည်းလှသော မဟာဂရုဏာရှင်များအဖြစ်
မိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့ ယူဆနေကြသည့် လူ့အခွင့်အရေး
လိုက်ပါဆောင်ရွက်သူတချို့ကား လူ့အခွင့်အရေး အရေခြုံဘင်္ဂလီတို့၏
အသုံးချခံများဖြစ်နေကြပါသည်။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ
လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီး ကင်တားနားလို ပုဂ္ဂိုလ်များပင်
အမှားအမှန်ပိုင်းခြား ဝေဖန်မှုမရှိဘဲ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံသူများဖက်မှ
ဖက်လိုက်ရပ်တည်ကာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို
တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သော ပြောဆိုဝေဖန်မှုများကို အားမနာတမ်း
ပြုလုပ်ခဲ့ပေသည်။ သူ့အား အခြားသမာသမတ်ရှိမည့်သူတစ်ဦးနှင့်
အစားထိုးပေးရန် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားများက ကုလသမဂ္ဂထံ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘင်္ဂလီအခြေချ နေထိုင်သူများကိစ္စ ယခုကဲ့သို့
ရှုပ်ထွေးလာရသည်မှာ အဓိကအားဖြင့် မြန်မာ့အာဏာပိုင်အဆက်ဆက်၏ မိမိတို့အာဏာ
တည်မြဲရေးအတွက်သာ အာရုံစူးစိုက်ကြခြင်း၊ နယ်စပ်လုံခြုံရေးကို
နိုင်ငံ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် စေလွှတ်ခံရသူ ၀န်ထမ်းအများစု၏
ဘင်္ဂလီများအား တံခါးမရှိ၊ ဓါးမရှိ ၀င်ထွက်သွားလာခွင့်ပြုခဲ့သော
ဗြိတိသျှတို့မှာလည်း ဤကိစ္စတွင် တာဝန်မကင်းလှချေ။
ဦးနုအစိုးရ၏ ဘင်္ဂလီအခြေချနေထိုင်သူများအပေါ် အထူးအခွင့်အရေးပေးကာ
တွန်းပို့ပေးခဲ့သည့် အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ရခိုင်လူထု၏ဆန္ဒအရ ရတညပါတီက
ရခိုင်ပြည်နယ်ပေးရန် တောင်းဆိုမှုအပေါ် ဘင်္ဂလီများမှ ကန့်ကွက်ခြင်း၊
ရခိုင်ပြည်နယ်ပေးပါကလည်း ပြည်နယ်အကြီး အကဲနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်
လွှတ်တော်ဥက္ကဌသည် ရခိုင်တစ်လှည့်၊ သူတို့တစ်လှည့်ဖြစ်ရမည်ဟု
တောင်းဆိုခြင်း၊ ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောမြို့နယ်များအား သူတို့အတွက်
တောင်းဆိုခြင်းများကား အာဏာရပဆပလအဖွဲ့ချုပ်၏ အမြော်အမြင်မဲ့
လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရလာဒ်ဆိုးများပင်ဖြစ်ကြပါသည်။
ရခိုင်လူမျိုးအမြောက်အများမှာ သွေးအေးအေးဖြင့် ရက်ရက်စက်စက်
အသတ်ခံခဲ့ကြရပြီး အများအပြားမှာမူ နတ်မြစ်ကိုဖြတ်ကျော်ကာ
အင်္ဂလိပ်ပိုင်နက်နယ်မြေသို့ အသက်လုထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါသည်။ တိုင်းပြည်ပြန်လည်
အေးချမ်းသောအခါ ဒီနာစပူရ် ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ရခိုင်လူမျိုးများအား
ပြန်လည်နေရာချထားပေးခြင်း မပြုခဲ့ချေ။ ရခိုင်လူမျိုးများ
ထွက်ပြေးသွားကတည်းက ရခိုင်လူမျိုးများ၏ ရပ်ရွာ များတွင် ဘင်္ဂလီများ
၀င်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြရာ ထိုရပ်ရွာများရှိ အိမ်ရာများမှာ အလိုအလျောက်
ဘင်္ဂလီများပိုင် ဖြစ်နေပါသည်။ ထို့အတူ ထိုရပ်ရွာများရှိ
ရခိုင်လူမျိုးများပိုင်ဆိုင်သော လယ်ယာများနှင် ဥယျာဉ်ခြံမြေများမှာလည်း
ဘင်္ဂလီများအပိုင် ဖြစ်နေပါသည်။ ဘင်္ဂလီများကား အဖိုးအခတစ်စုံတစ်ရာမပေးရဘဲ
အဆိုပါရပ်ရွာများတွင် မြေရှင်လယ်ရှင်များ ဖြစ်နေကြပါသည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပြီးနောက်
မူဂျာဟစ်သောင်းကျန်းသူများက ရခိုင်အမျိုးသမီးများအား မုဒိန်းကျင့်ခြင်း၊
ရခိုင်ရပ်ရွာများအား မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ရခိုင်လူမျိုးများအား
ရခိုင်လူမျိုးများအဖို့ အနောက်ဖက်နယ်စပ်ဒေသ၌ ဆက်လက်မနေရဲကြတော့ဘဲ
ဒုတိယအကြိ်မ် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ထိုဒေသတွင်း
ရခိုင်နှင့်ဘင်္ဂလီ လူဦးရေအချိုးအစား မညီမျှမှုမှာ
ပိုမိုကြီးထွားခဲ့ရပါသည်။ နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ် ကျော်လာသည့်တိုင်
မြန်မာအစိုးရ အဆက်ဆက်အနေဖြင့် ရခိုင်လူမျိုးတို့ ဇာတိချက်ကြွေ
မွေးရပ်မြေများမှ နေရာပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ကြရသည်ကို တစ်စုံတစ်ရာ
အရေးတယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသေးချေ။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်က ဘင်္ဂလီများ
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားစဉ်ကလည်း ထိုနေရာများအား မူလပိုင်ရှင်များလက်သို့
ပြန်ပေးရန် အစီအစဉ်မလုပ်ခဲ့ပေ။ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော ဘင်္ဂလီများကိုသာ
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများနှင့် လူနေအိမ်ခြေများအား မီးရှို့ဖျက်ဆီးကာ
အားကိုးရာမဲ့ဖြစ်နေကြသော ရခိုင်အပါအ၀င် ဒေသခံလူမျိုးများအား ရက်ရက်စက်စက်
သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်ကို လူတိုင်းကြားသိပြီး ဖြစ်ကြပါသည်။
ဘင်္ဂလီလူယုတ်မာများကား ၁၉၄၂ ခုနှစ်ကလည်း ဤအတိုင်းပင်
ကျူးလွန်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ဘင်္ဂလီများအနေဖြင့်
ရခိုင်အပါအ၀င် ဒေသခံလူမျိုးများအပေါ် နောက်နောင် ထိုကဲ့သို့
မကျူးလွန်ရအောင်နှင့် မကျူးလွန်ရဲအောင် လက်ရှိအစိုးရအနေဖြင့်
ရေတိုရေရှည်စီမံကိန်းများ ချမှတ်လုပ်ဆောင်ရန် ယခုအခါ အခြေအနေက
ကျွန်တော့်အနေနှင့်မူ အောက်ပါအချက်များအား အပူတပြင်း အကောင်အထည်ဖော်ရန်
(က) ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောမြို့နယ်များ၌ ရခိုင်အပါအ၀င်
ဒေသခံများနေထိုင်ရာ အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုံလောက်သော လုံခြုံရေးစခန်းများ
(ခ ) ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောမြို့နယ်များတွင် ဒေသခံများဖြင့်
ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့စည်းပြီး မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရေး အစီအစဉ်များ
(ဂ ) ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရခိုင်လူမျိုးများဖြင့်
နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့နှင့် ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးရန်။
၂။ အခြေချနေထိုင်သူဘင်္ဂလီများအား ပြန်လည်နေချထားရေး
(က) ဘင်္ဂလီများအား စနစ်တကျစိစစ်ပြီး ခိုင်လုံသောအထောက်အထားရှိသူများနှင့်
အထောက်အထားမဲ့သူများဟူ၍ ခွဲခြားနေရာ ချထားပေးရန်။
(ခ ) ဘင်္ဂလီများအား တစ်နေရာတည်းတွင် စုပြုံမထားဘဲ နေရာအလိုက်
(ဂ ) ထွက်ပေါက်ဝင်ပေါက်ကောင်းသည့် မြစ်နား၊ ပင်လယ်နားဒေသများ၌
၄င်းတို့အား နေရာချထားမှုကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ရှားရန်။
(ဃ) အထောက်အထားမဲ့သူ ဘင်္ဂလီများအား လိုအပ်သလိုအရေးယူသွားရန်။
၃။ လူဦးရေအချိုးအစား မျှတအောင်ဆောင်ရွက်ရေး
ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောမြို့နယ်များတွင် ရခိုင်လူမျိုးလူနေရပ်ရွာများ
ပြန်လည်ထူထောင်ပေးရန် (အထူးသဖြင့် ၁၉၄၂ ခုနှစ်ကတည်းက
ရခိုင်ရပ်ရွာများတွင် နေထိုင်ကြသူဘင်္ဂလီများအား သင့်တော်သည့်နေများတွင်
နေရာချပေးကာ ရခိုင်လူမျိုးများ အား ထိုနေရာများတွင် ပြန်လည်နေရာ
ရခိုင်လူမျိုးများပိုင် အိမ်မြေများ၊ လယ်ယာမြေများအား
အထက်ဖော်ပြပါအစီအစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပါမှ လုံခြုံရေးအာမခံချက်ရရှိကာ
ရခိုင်အပါအ၀င် ဒေသခံလူမျိုးများအဖို့ မိမိတို့ဘိုးဘွားပိုင်
နေထိုင်နိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘင်္ဂလီအရေး၊ နောင်မအေး မဖြစ်ရလေအောင်
ရခိုင်တို့၏အနာဂါတ်အား ရခိုင်လူမျိုးများကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနိုင်ကြပါစေ။
၁။ ဆရာခိုင်မျိုးစောင့်၏ "ပါလီမန်ခေတ် ရခိုင်ပြည်နိုင်ငံရေးနှင့်
မျက်မှောက်ခေတ် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောအခြေအနေစာအုပ် (တိုကျို၊ ဂျပန်၊
၂။ မိခင်ကြီး၏ ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံ ပြောပြချက်များ
တာမွေအ၀ိုင်းအနီ ဗုံး ဟုသံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသော ပစ္စည်းတွေ့ရှိ
ဗဟန်းမြို့နယ်အရှေ့ ရွှေဂုံတိုင်ရပ်ကွက်အောင်ချမ်းသာ အိမ်ရာတိုက်အမှတ် ၉ရှေ့တွင်ဗုံး ဟု သံသယ ဖြစ်ဖွယ်ရှိ သောပေါက် ကွဲစေတက် သည့်အရာဝတ္တု တစ်ချို့ကို သြဂုတ်၂၈ ရက်နံနက် ၇နာရီ တွင်တွေ့ ရှိခဲ့ ကြောင်း
ရပ်ကွက် နေပြည်သူများက ပြောကြား သည်။
အဆိုပါပေါက်ကွဲစေတက် သောအရာဝတ္တုများကိုအောင် ချမ်းသာအိမ်ရာတိုက်အမှတ်၉ အရှေ့ ကားပါကင်တွင် ရပ်ထား သည့် ဆူဇူးကီးပစ်ကပ်ကားနောက် ခန်းတွင်တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယင်းတို့ကပြောကြားသည်။
““အဲဒါကိုတွေ့တော့ ကားမောင်းတဲ့သူကဘာတွေ လည်းမသိဘူးဆိုပြီး တော့ရဲစခန်းကို အကြောင်း ကြားကြ တယ်။ တာဝန်ရှိ သူတွေရောက်လာေ တာ့သံစတွေ၊ ရေသန့်ဘူး နဲ့ ဂဏာန်းပေါင်းစက် တစ်လုံးကို တွေ့တယ်။ အဲဒီအချိန် မှာ စစ်တပ်က ဗုံးရှာတဲ့ သူတွေ ရောက်လာပြီးတော့ စစ်ခွေးတွေ နဲ့ စစ်ဆေးတယ်””ဟု အောင်ချမ်း သာ အိမ်ရာတွင်နေထိုင်သည့် ကိုအောင်ကြီးကပြောသည်။
ပေါက်ကွဲစေတတ်သည့် ကားမှာ အောင်ချမ်းသာ အိမ်ရာရှိ င်္သမတမေိ ကုမ္ပဏီမှ ရုံးအသုံးပြု သည့် ကားဖြစ် ကြောင်း ကိုအောင် ကြီးကပြောသည်။
““ဖြစ်စဉ်ကို ရန်ကုန်တိုင်းမ် ကရဲမှူးကြီးဆင်းလာတာကိုတွေ့ ရတယ်။နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးက ဗိုလ်မှူးကြီး တစ်ဦးလည်း ပါတာတွေ့ရတယ်။ ဘာအန္တရာယ်မှမဖြစ် တော့ဘူးလို့တော့ မှတ်ချက်ပေး သွားတယ်””ဟု အဆိုပါဖြစ်စဉ် ကို တွေ့ရှိခဲ့သည့် အောင်ချမ်းသာ အိမ်ရာမှ ကိုကျော်အေးကပြော သည်။
““ပစ္စည်းတွေကို စစ်ဆေးတဲ့ အခါမှာ ယမ်းနဲ့ ဒီတိုနေတာမပါလို့အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ ဂဏာန်း ပေါင်းစက် လည်းပါတော့ အဲဒါကို စစ်ဆေးသေးတယ်””ဟု ကိုအောင်ကြီးက ထပ်မံပြောကြား သည်။
ယင်းဖြစ်ကြောင့် ရွှေဂုံတိုင် မှ တာမွေသို့ သွားသည့် ကားလမ်းကို ခေတ္တခဏပိတ်ထားခဲ့ကြောင်း ရပ်ကွက် နေပြည်သူများ ကိုပြော သည်။
““အဲဒီပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ ပစ္စည်းက ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးဖြစ် တယ်ဆိုတာကို ကျွမ်းကျင်ရဲတပ် ဖွဲ့ဝင်တွေက စစ်ဆေးတယ်။ လိုအပ် ရင် ဘီအီးတပ်ကို အကြောင်းကြား တယ်။ဘီအီးတပ်က ကျွမ်းကျင် သူတွေအနေနဲ့ ဘယ်လို လက်နက် ခဲယမ်းမျိုး၊ ဘယ်လိုပေါက်ကွဲစေ တတ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေပါဝင်လဲ ဆိုတာကို အသေးစိတ် စစ်ဆေး ပါတယ်””ဟု အရှေ့ပိုင်းခရိုင်(ဒ /န) မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
မိုးသီးဇွန်-ရန်ကုန်သွားခါနီး နယူးယောက်လေဆိပ်က ဖုံးနဲ့ပြောခဲ့ တယ်
နုတ်ဆက်ခဲ့ ပါတယ်လို့ပြောပြီး အွန်လိုင်းမှာ စာရေးလာတာတွေ့ ရတယ်-
ဒီတော့ အခုဘယ်မှာလဲလို့မေးကြည့်ဖြစ်တယ် ။ မိုးသီးဇွန်က အခု
နယူးယောက်လေဆိပ်ထဲရောက်နေပြီ ။ ကျနော်တို့အခု သွားတာ ( ရ ) ယောက် ၊
ဘာမှ လက်မှတ်ထိုးစရာ မလိုဘူး ။ ဖေါင်တွေဖြည့်စရာမလိုဘူး ။ ကျနော်ဆိုရင်
သံရုံးကို ဗီဇါလဲ သွားမယူဘူး ၊ လူတယောက်ကို
ဗီဇါသွားယူခိုင်းလိုက်တာဖြစ်တယ် ။ ဗီဇါကြေးလဲ မပေးရဘူး ၊ ပြောချင်တာက
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ မှ ဖေါင်တွေဖြည့်တာမျိုးတွေ မလုပ်ရတာဘဲ ပြောချင်တယ် ။
ထိုင်းမှာ ခဏနားမယ် ။ ကျနော်ရခိုင်ကို သွားပါ့မယ် ။ ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေ
့နဲ့တွေ့ ပါမယ်လို့ပြောတယ် ။ ဒီတော့ ရမ်းဗြဲက မသီတာထွေးတို့ 
မိသားစုရှိရာသို့ သာ သွားပါလေ ဆိုပြီး ပြောလိုက်ပါတယ် ။ သတင်းထောက်တွေနဲ
့ တွေ့ လို့ရခိုင်ကိစ္စ ဘယ်လိုပြောရမှာလဲလို့မေးတော့ ပုဒ်မ္မ ( ၁၄၄ )
ကို ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့အဲဒီဥပဒေကို ဘာမှု နားမလည်ကြတဲ့ အခါ ဒီလိုဘဲ
လူသေမှုတွေ မီးရို့ မှုတွေ ဖြစ်ကြရမှာဘဲ ဆိုတာ ပြောပြလိုက်ပေါ့လို့ 
ပြောပြလိုက်ပါတယ် ။ သူက တကယ်ဘဲ ရခိုင်သွားချင်တဲ့ 
စိတ်ဆန္ဒရှိနေသူဖြစ်တယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ် ။ သူ့ ကို နာမည်ဖျက်နေကြတာတွေ
ရှိတယ် ။ ဒါကို ပပျောက်သွားစေချင်တယ် ။ ဒါကြောင့် ပြောပြလိုက်ပါတယ် ။
ရခိုင်ရောက်ရင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတိုးတက်ရေးပါတီက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ဦးအောင်မြကျော်တို့ နဲ့တွေ့ လိုက်ပါလို့မှာလိုက်တယ် ။ မိုးသီးဇွန်က
အမေရိကားမှာ ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုကြိုးစား လုပ်ကိုင်နေကြတယ်ဆိုတာကို
ပြောပြပါ့မယ်လို့တခုပ်တရ ပြောတယ် ။ ပြီးတော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့တွေ
့ဆုံဖြစ်တဲ့ အခါ အမေရိကရောက် ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ ဆုံဖို
့အကြောင်းကိုလဲ ပြောဖြစ်အောင် ပြောပြလိုက်ပါဆိုလို့ပြောပြပါ့မယ်ဆိုတဲ
့အကြောင်း ပြောသွားပါတယ် ။ စက်တင်ဘာလ( ၁ ) ရက် မနက် ( ၈ ) နာရီမှာ
ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို ရောက်မှာဖြစ်ပြီး သူက မိသားစုတွေကို မကြိုခိုင်းဘူး-
လေဆိပ်မှာ မျက်ရည်တွေကျ ငိုနေကြတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို မြင်ရဖူးများလွန်းလို
့ ဘယ်သူ့ ကိုမှ မကြိုဆိုခိုင်းထားဘူးလို့လွန်ခဲ့ တဲ့-၈၈၈၈- လေးလုံး
နေ့အခန်းအနားမှာ ပြောပြခဲ့ တယ် ။ ခုတော့ မိုးသီးဇွန် ရန်ကုန်သွားပြီမို
့ -၈၈-မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့ထောင်ကျနေခဲ့ တဲ့မိတ်ဆွေ
သူငယ်ချင်းများဖြစ်တဲ့မင်းကိုနိုင်တို့နဲ့ 
တော်လှန်ရေးနယ်မြေရောက်လာတဲ့မိုးသီးဇွန်တို့ ရဲ့ခါးသီးနေသော
ချိုမြိန်သည့် အတွေ့ အကြုတွေကို စမြုံ့ ပြန်ကြနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ 
ပြောရတော့မလို ဖြစ်သွားပါပြီ ၊ နောက်ဆုံးအနေနဲ့မိုးသီးဇွန်ကို
မှာလိုက်တာကတော့ ခ၇ီးသွားတဲ့ အခါ ကျမ်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပေးပါလို့ 
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/28/20122အကြံပြုခြင်း
အမည်မည်း စာရင်းသွင်းထားသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၀၀၀ ကျော် ပယ်ဖျက်
Over 2000 exiled Myanmars revoked from government's black lists by Yangon Press International on Tuesday, August 28, 2012 at 1:25am ·
by Yangon Press International on Tuesday, August 28, 2012 at 4:53am ·
ကိုကိုကြီး ၏“ ပြောချင်လို့ပြောခဲ့တာတွေ ” စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ
by Yangon Press International on Tuesday, August 28, 2012 at 8:35am ·
သြဂုတ်၊ ၂၈၊ ၂၀၁၂ (YPI)
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောမတည်ငြိမ်မှုများနှင့်လုံခြုံရေးစိတ်မချရမှုကြောင့် ပြန်လာရန်ကြန့်ကြာခဲ့သောကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှ မြေပုံမြို့နယ်သို့သွားရောက်ခဲ့သည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တရားထိုင်သူများကို ဌာနဆိုင်ရာများအကူညီဖြင့် ယခုလ ၂၆ ရက်ကနေရပ်သို့ ပြန်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း မိသားစုဝင်များကပြောသည်။
မြေပုံသင်္ဘောဆိပ်တွင် ရဲနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအချို့ကလိုက်လံပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး သင်္ဘောခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးအဆင်ပြေကြောင်းလည်း ၎င်းတို့ကပြောသည်။ လုံခြုံရေး ရဲဝန်ထမ်း ခြောက်ဦးနှင့်အတူ မလိခ အမြန်ရေယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
တရားထိုင်အဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးက “မြေပုံ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက သင်္ဘောဆိပ်အထိ ထော်လာဂျီငှားပေးပါတယ်” ဟုပြောသည်။
ထို့ပြင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် မြေပုံမြို့သို့ရောက်ရှိနေသော ကျောက်ဖြူမှအခြားမွတ်စလင်၁၅ ယောက်လည်းပါလာကြောင်း
ပဋိပက္ခများမဖြစ်မီက ပေါက်တော၊ မင်းပြား စသည့်မြို့များမှ မြေပုံမြို့သို့ရောက်ရှိနေပြီး နေရပ်ပြန်ရန် ခက်ခဲနေသည့် အခြား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များရှိနေပြီး၎င်းတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များအစီအစဉ်ဖြင့် ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မြေပုံဒေသခံ
တစ်ဦးက ပြောသည်။ ။
၀န်ကြီး နှစ်ဦးနှင့် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်တို့ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်
အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှစ်ဦးနှင့် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်တို့ အား နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြု
Tuesday, 28 August 2012 19:48
ထို့အတူ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးစိုးဝင်းအား သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ၀န်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းလဲတာဝန်ပေး လိုက်ကြောင်းကိုလည်း သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အရှိန်မြှင့်ရန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် ဒုတိယ၀န်ကြီးများအား သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က အမိန့်များ ထုတ်ပြန်၍ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က စတင် ပြောင်းလဲတာဝန် ပေးအပ်လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲ တာဝန်ပေးအပ်လိုက်သော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများမှာ ကိုးဦးဖြစ်သည်။ ထို့အတူ ဒုတိယ၀န်ကြီး ၁၅ ဦးကိုလည်း ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခဲ့သည်။
“၀န်ကြီးဌာနတွေမှာ reform planတွေ ဆောင်ရွက်နေတာ ရှိပါတယ်။ ခုကိစ္စကတော့ လူမှန်၊ နေရာမှန် ပေါ့နော်။ သွားမယ့် စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အဲဒါတွေကို အလေးပေးပြီး ဖော်ဆောင်သွားမယ့် အခင်းအကျင်း ကို စတာပေါ့။ အလေးပေး ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့နေရာမှာ ထားသင့်တဲ့ လူမှန်၊ နေရာမှန် ပြောင်းရွှေ့ တာဝန် ပေးတာပေါ့နော်။ အဲဒါက reform ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်ဖို့ပါ”ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ပြော ရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ နှင့် ဒုတိယ၀န်ကြီးများအား ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်လိုက်ခြင်းသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် စတင် တာဝန်ယူခဲ့သည့် သမ္မတဦးသိန်းစိန် လက်ထက် အကြီးမားဆုံး အစိုးရ အဖွဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလည်း ဖြစ်သည်။
ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးလိုက်သော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများမှာ ဦးစိုးသိန်း၊ ဦးအောင်မင်း၊ ဦးလှထွန်း၊ ဦးတင်နိုင်သိန်း၊ ဦးအောင် ကြည်၊ ဦးကျော်ဆန်း၊ ဦးအုန်းမြင့်၊ ဦးအေးမြင့်၊ ဦးတင့်ဆန်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။
ဦးစိုးသိန်းအား စက်မှုဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ သမ္မတ ရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဦးအောင်မင်း အား ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ သမ္မတ ရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဦးလှထွန်း အား ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ သမ္မတ ရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အဖြစ်လည်းကောင်း၊ဦးတင်နိုင်သိန်း အား အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွား ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ သမ္မတရုံးဝန် ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဦးအောင်ကြည်အား လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာနနှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဦးကျော်ဆန်းအား ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး မှ သမ၀ါယမ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဦး အုန်းမြင့်အား သမ၀ါယမ၀န်ကြီးဌာ နနှင့် မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန် ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်လည်း ကောင်း၊ ဦးအေးမြင့်အား သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဦးတင့်ဆန်းအား ဟိုတယ်နှင့် ခရီး သွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာနနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးမှ အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အဖြစ်လည်းကောင်း ပြောင်းလဲ တာဝန်ပေးခဲ့သည်။
ဒုတိယ၀န်ကြီးများအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်သူများထဲတွင် အမျိုးသမီးလေးဦး ပါဝင်ပြီး ပညာရှင်အချို့လည်း ပါဝင်သည်ကို တွေ့ ရသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ တက်လာပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အဆက် မပြတ်ဆောင်ရွက်လာမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသော အရေး ယူပိတ်ဆို့မှုများကို နိုင်ငံတကာက ဖြေလျော့ဆိုင်းငံ့မှုများ ပြုလုပ်လာကြသလို မြန်မာနိုင်ငံတွင်လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန်လည်း စိတ်ဝင်စား လာကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လများကလည်း အစိုးရအဖွဲ့တွင် ၀န်ကြီးများ အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်သည်ဆိုသော သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ဖူးသည်။
ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီးအား သာသနာရေး ဒုဝန်ကြီးအဖြစ် ရွှေ့ပြောင်း
၀န်ကြီး ဋ္ဌာန အပြောင်းအလဲများကို နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှယနေ့ညနေ ဆက်လက် ထုတ်ပြန်ကြေညာလျှက်ရှိရာ နောက်ဆုံး သိရှိရသည့် ထုတ်ပြန်ချက်အရ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးစိုးဝင်းအား သာသနာရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး အဖြစ်ပြောင်းလဲ တာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာနတွင် ယခင်အလုပ်သမား ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည်က ၀န်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းလဲ တာဝန်ယူမည်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ၀န်ကြီးအဖြစ် ဦးပိုက်ထွေးအား ယမန်နေ့က ခန့်အပ်ကြောင်း ကြေညာထားသည်။
၀န်ကြီးအ ပြောင်းအလဲတွင် အရပ်သားနှင့် ပညာရှင်များ ပိုမိုပါဝင်လာ
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ ယနေ့နေ့စွဲဖြင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး (၉) ဦးနှင့် ဒုတိယ၀န်ကြီး (၁၅) ဦးတာဝန်ပေး ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ရာ ဒုဝန်ကြီး (၁၅) ဦးထဲတွင် အရပ်သား ပညာရှင်များ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ ပါဝင်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။
ထို့ပြင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောဝန်ကြီးဋ္ဌာန၊ ဘဏ္ဍာအခွန်ဝန်ကြီးဋ္ဌာန၊ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာန တို့တွင်လည်း ဒေါက်တာဘွဲ့ရ ပညာရှင်များအား ဒုဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ် လိုက်သည်ကိုတွေ့ရသည်။
ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းရှင် ဦးသောင်းတင်မှာ ဆက်သွယ်ရေး ဒုဝန်ကြီး အဖြစ်၎င်း၊ စီးပွားရေးပညာရှင် ဒေါက်တာဒေါ်ခင်စန်းရီ၊ နိုင်ငံသမ္မတ စီးပွားရေး အကြံပေး ဦးဆက်အောင်တို့မှာ အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဒုဝန်ကြီးအဖြစ်၎င်း အသီးသီးပါဝင်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။
ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက်က ၀န်ကြီး၊ ဒုဝန်ကြီး အားလုံးနီးပါးမှာ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ ဖြစ်ခဲ့ကြရာမှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဖြင့် အာဏာရလာသည့် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသစ်လက်ထက်၌ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးတာဝန်ပေးအပ်ရာတွင် အရပ်သား အနည်းငယ်ပါဝင်လာခဲ့သည်။
ထို့နောက် တနှစ်ကျော်အကြာတွင် ယခုကဲ့သို့ ဒုဝန်ကြီး များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ရာ၌ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ် ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်အချို့ ပါဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့ ညထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်များအရ ၀န်ကြီးဋ္ဌာန အချို့၏ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးများ ရွှေ့ပြောင်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းသာ ပါဝင်၍ ၎င်းတို့ရွှေ့ပြောင်းသွားသည့် နေရာများတွင် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရသူအချို့အား ကြေညာရန် ကျန်ရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရထားပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာန၊ အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀န်ကြီးဋ္ဌာန တို့တွင် လစ်လပ်သွားသည့် ၀န်ကြီးနေရာတွင် မည်သူ့အား တာဝန်ပေးအပ်မည်ကို ကြေညာခြင်း မပြုသေးပေ။
ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် အစိုးရ တက်လာပြီး တနှစ်ကျော်အကြာ ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ဒုတိယအဆင့် စတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကာ နောက်ပြန်ဆွဲလိုသူများ၊ ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်ရန် နှေးကွေးသူများအားချန်ထားခဲ့ရမည် ဖြစ်သည်ဟုလည်း မိန့်ခွန်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းများ တွင်ပြောဆိုခဲ့ရာ ယခု ၀န်ကြီးနှင့်ဒုဝန်ကြီး အပြောင်းအလဲများသည် ယင်းမူပေါ် အခြေခံကာ လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရကြောင်း နိုင်ငံရေး လေ့လာသူတဦးက သုံးသပ်သည်။
၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုရာတွင် ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက် ၀န်ကြီး အပြောင်းအလဲများမှာ မည်သည့်အချက်ပေါ် အခြေခံမှန်း မသိရှိနိုင်ပဲ ယခု အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ပွင့်လင်းမှု အနည်းငယ်ရှိလာကာ ၀န်ကြီးဋ္ဌာန တာဝန် အပြောင်းအလဲများ လုပ်ရခြင်းအကြောင်းကို ဆက်စပ်နားလည်နိုင်ကြောင်း ဝေဘန်သုံးသပ် ပြောဆိုသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (၃) ဦး ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန သို့ ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ပေး လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်(၃)ဦးမှာ တပ်မတော် (လေ) မှ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိူင်ငံ အတွင်းအမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားနေသူများ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ထုတ်ပြန်ကျေညာချက်
by Ko Baloi on Tuesday, August 28, 2012 at 4:43pm ·
မြန်မာနိူင်ငံ အတွင်းအမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားနေသူများ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
မြန်မာအစိုးရမှ အမည်ပျက်စာရင်းဝင် ၂၀၈၂ ဦးအား ပယ်ဖျက်ပေးခြင်းအပေါ် အပြုသဘောဆောင်သည့်အနေဖြင့်
မြန်မာနိူင်ငံအတွင်းရှိ အမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားနေသောသူများ၏ အမည်စာရင်းကို ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာနိူင်ငံ
အတွင်းအမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားနေသူများ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က အမည်ဆိုးစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်
ပါတယ်။ ထိုသူများ၏ အမည်စာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်..။
၁- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်
၂- လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရရွှေမန်း
၃- ယခင်- အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်
၄- ယခင် ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း တို့လေးဦးတို့အား အမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားနေသူများစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်
လိုက်ပါတယ်။ ကျန်အမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားနေသော သူများစာရင်းနဲ့ နောက်တိုးစာရင်းတွေကိုထပ်မံပြုစုထားပါသည်။
UN နှင့် INGO ၀န်ထမ်း သုံးဦးအား နိုင်ငံတော်သမ္မတ ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်ပြု
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသော UN နှင့် INGO ၀န်ထမ်း သုံးဦးအား နိုင်ငံတော်သမ္မတ ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်ပြု
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသော UN နှင့် INGO ၀န်ထမ်း သုံးဦးအား ၀န် ထမ်း(၃) ဦးအား ပြစ်ဒဏ်မှလွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့် ပြုလိုက်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
အဆိုပါသုံးဦးမှာ ၁။ ဦးကာယက်စ်(ခ)ခင်ရွှေ (WFP) ထောင်ဒဏ် (၂)နှစ် ၂။ ဦးအဏာဝါဆာဒဏ်(ခ)ခင်မောင် (UNHCR) ထောင်ဒဏ် (၃)နှစ် ၃။ ဒေါ်ချိုလေးမာ(ခ)ချိုမာ (UNHCR/CSSEP) ထောင်ဒဏ် (၆)နှစ် ဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့မှာ ကျူးလွန်ခဲ့သော ပြစ်မှုများကြောင့် ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း ခံထားရသူများ ဖြစ်ကြသည်။
ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ၎င်းတို့အား မောင်တောမြို့နယ်တရားရုံးမှ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့က ထောင်ဒဏ်အသီးသီး ချမှတ်ခဲ့သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/28/2012 1 အကြံပြုခြင်း
ဒီလှိုင်း (D.WAVE)ဂျာနယ်ရုံးရှေ့တွင် ရပ်ထားသောကားပေ...
တာမွေအ၀ိုင်းအနီ ဗုံး ဟုသံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသော ပစ္စည်းတေ...
မိုးသီးဇွန်-ရန်ကုန်သွားခါနီး နယူးယောက်လေဆိပ်က ဖုံး...
အမည်မည်း စာရင်းသွင်းထားသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၀၀၀ ကေ...
ကိုကိုကြီး ၏“ ပြောချင်လို့ပြောခဲ့တာတွေ ” စာအုပ်မိတ...
အစ္စလာမ်တရားထိုင်သူများ ဌာနဆိုင်ရာအကူအညီဖြင့် နေရပ်...
၀န်ကြီး နှစ်ဦးနှင့် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်တို...
မြန်မာနိူင်ငံ အတွင်းအမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားနေသူများ ...
UN နှင့် INGO ၀န်ထမ်း သုံးဦးအား နိုင်ငံတော်သမ္မတြ...